रेशम भन्छन्, ‘शपथ लिएपछि जेल जाने पहिलो व्यक्ति मै हुँ’ - Everest Dainik - News from Nepal
रेशम भन्छन्, ‘शपथ लिएपछि जेल जाने पहिलो व्यक्ति मै हुँ’
काठमाडौं, पौष १९ । पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर कैलालीको क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित रेशम चौधरीलाई कारागार लगिएको छ । प्रहरी टोलीले शपथ सकिएलगत्तै सिंहदरबारबाट पुनः डिल्लीबजार कारागार लगिएको हो ।
वि.सं. २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा भएको हत्याकाण्डमा मारिएका सात जना सुरक्षाकर्मी र नाबालकको हत्याका मुख्य दोषी चौधरीमाथि कानुनी कारवाही चलिरहेका बेला सपथग्रहण गराइएको हो। अब सांसदकै हैसियतमा उनी जेल बस्नेछन्।
याे पनि पढ्नुस को हुन् रेशम चौधरी ?
यसैबीच, रेशमले सांसद पदको शपथ ग्रहण गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा सभामुख कृष्णबहादुर महराबाट शपथ लिएपछि चौधरीले खुसी व्यक्त गरेका हुन्। उनले शपथ ग्रहणपछि जेल जाने पहिलो व्यक्ति भएको समेत दाबी गरे। भने, शपथ लिएपछि जेल जाने पहिलो व्यक्ति मै हुँ।’
याे पनि पढ्नुस रेशमले लिए थारु भाषामा सपथ